Barcelona Iyo Xiddigeheeda Oo Dhaqaale Xooggan Ka Helay Safarkii South Afrika - Laacib.net
Barcelona Iyo Xiddigeheeda Oo Dhaqaale Xooggan Ka Helay Safarkii South Afrika
by Jaalle | Thursday, May 17, 2018
Safarkii Barcelona ee Johannesburg ee ay kula ciyaartay Mamelodi Sundowns waxa uu la yaab ku noqday dad badan, walow ay dhaqaale badan ku heleen iyada iyo ciyaaryahanadeeda.
Walow ol’olaha la oran karo wuu u dhammaaday Blaugrana, laakiin waqtiga laga maqnaa qoysaska, daalka dheeriga ah iyo halis dhaawacyo ee koobka aduunka kahor ayaa ka dhigan in halkaas dhaqaale xoog leh safka ugu jiro.
Waxaa la hubaa in dhaqaale ku jiray marka la eego in ciyaaryahan heleen 1.5 million euro ka soo muuqashaddii kulankii 3-1 ku soo dhammaaday, waxaa qeyb saday xiddigiihii u safray South Africa.
Barcelona, koox ahaan waxa ay u heshay 3m euro.
Barcelona markii ay soo laabatay, durba waxa ay bilowday xalqadeheedii tababarka ee caadiga ahaa khamiistii, jimcaha fasax ay heli doonaan kahor inta aysan Real Sociedad la dheelin kulankooda ugu dambeeya ee La Liga.
maxamuud maxamed 18-05-2018 at 8:07 am -
ma hurdaa kasoo kacday horta warbixinta akhri
chelsea lagama hadlin ee waa barca
koobna lama hadal qaadin ee waa safar
kkkkkkkkkkkkk u fiirso saaxiib qoraalka
Asad cali guray 17-05-2018 at 9:04 pm -
Kkkkkk chelsea maxay qaaday kkkkkk
Guuldarada aabeheed ayay noqotay
Mohamoud Mohamed 17-05-2018 at 8:45 pm -
Chelsea championkii ma qaaday